IJean-Michel Cousteau Resort Fiji Inikeza Iholide Lomndeni Elingenakuqhathaniswa
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » IJean-Michel Cousteau Resort Fiji Inikeza Iholide Lomndeni Elingenakuqhathaniswa
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Ze-Fiji • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • emihlanganweni • Izindaba • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Isithombe sihlonishwa yi-fijiresort.com
Njengoba imindeni ibheke ukuphinde ihlangane futhi ijabulele okwabelwana ngakho, iJean-Michel Cousteau Resort, eFiji, indawo ephambili ye-eco-adventure etholakala eSouth Pacific, inikeza izinhlobonhlobo zezinto ezithokozisayo ezifanele abahambi bezizwe ngezizwe.
I-Premier Eco-Luxury Resort yase-South Pacific inikezela ngemisebenzi eyodwa yohlobo kanye nesipiliyoni sabo bonke abantu.
Ifakwe endaweni ekhethekile, eluhlaza eshisayo esiqhingini saseVanua Levu esibheke emanzini anokuthula eSavusavu Bay, Indawo kaJean-Michel Cousteau ukuphunyuka okungenakuqhathaniswa kwemindeni emikhulu efuna ukudala izinkumbulo ezihlala njalo ezizukulwaneni ezizayo, ukuphumula, nokuzidela ngemva kwezinyanga zokuhlalisana nokuxhumana ngezingxoxo zenkomfa yevidiyo engapheli.
Ukuvakasha kwezizwe ngezizwe kuyaqhubeka nokukhula:
Kuthiwa ibanga lenza inhliziyo ikhule ithandeka, ngalokho emqondweni imindeni ingabuthana ngentshiseko futhi ivale isikhathi esichithwe kude nomuntu ngamunye phakathi neminyaka emibili edlule. Ukuhamba nogogo nomkhulu, abashana akukaze kubaluleke kakhulu
Njengoba isifiso semibuthano yomndeni eyandisiwe siyanda emhlabeni wonke, imindeni ihlola izindlela zokuxhumana ngezindlela eziphusile. Ngokwesiko, amaholide emindeni ezizwe ngezizwe abe phezulu ohlwini lwezindlela zokwenza izibopho zomndeni eziqinile nezinkumbulo ezithandekayo ezihlala njalo.
“Siyakubona ukubaluleka kwemindeni ukuphinde ikwazi ukwamukela, ukuqoqana, kanye nokuhamba ngokuphepha ngemva kwamathuba amaningi kangaka aphuthelwe kule minyaka emibili edlule, kuletha injabulo ezinhliziyweni zethu ukwamukela izivakashi nemindeni yazo eJean-Michel Cousteau Resort, ” kusho uBartholomew Simpson, umphathi jikelele weJean-Michel Cousteau Resort, eFiji. “Njengoba uhambo lwezizwe eziningi lusezingeni eliphezulu ohlwini lwamabhakede emindeni eminingi lwango-2022, akukaze kubaluleke kakhulu ukuthi iJean-Michel Cousteau Resort yabelane ngezinhlelo zethu ezikhethiwe nezigigaba ezigqamisa izimangaliso zemvelo ezimangalisayo zaseNingizimu Pacific.”
“Sisagxilile ekuzibophezeleni kwethu ukuhlinzeka izivakashi zethu ngeholide elimnandi nelikhumbulekayo.”
Indawo ephezulu yohambo lwezizukulwane eziningi:
Ilungele ubudlelwano bomndeni, izivakashi ezibuyayo kanye nabafuna uhambo olusha bazothola ithuba lokulala endaweni esemthethweni yase-Fijian, bacwiye emanzini amahle kakhulu emhlabeni, bazipholele ngokushaya i-snorkel futhi bahlole indawo nge-sea kayak, noma babaleke baye e-sea kayak. isiqhingi esizimele sepikiniki. Idizayinelwe abahambi bayo yonke iminyaka, izivakashi zingaphinda zivakashele imihlume, ipulazi leparele, isigodi sangempela sase-Fijian, noma ziqwale ihlathi lemvula futhi zithole impophoma efihliwe.
Ngisho nezihambeli ezincane kakhulu zizomangala ngokuvakashela i-Bula Club, iklabhu yezingane ewine imiklomelo yale ndawo, lapho zizochitha khona izinsuku zazo zihlola futhi zifunda ngomhlaba ozizungezile ngemidlalo nemisebenzi yangaphandle. Izingane ezineminyaka engu-5 nangaphansi zinikezwa umzanyana wazo ngesikhathi sokuhlala kwazo; futhi izingane ezineminyaka engu-6 kuya ku-12 zijoyina amaqembu amancane aholwa umngane.
Abasebenzi bakwaJean-Michel Cousteau Resort bagonywe ngokugcwele, baqeqeshwe futhi bazibophezele ukweqa izinga eliphakeme kakhulu lezindinganiso zokuphepha nokukhucululwa kwendle ku-Covid-19 kuyilapho behlinzeka ngenkonzo yamakhasimende echwepheshile neyamukelayo. Abasebenzi bazobingelela izivakashi ngezimbozo zobuso, kanti kwezinye izikhathi amagilavu, ngenkathi beqinisekisa ukuqhelelana komphakathi nokomzimba. Ukwengeza, zonke izindawo ezithintekayo zizohlanzwa futhi zihlanzwe njalo.
Ukwengeza, iTourism Fiji idale “Ukuzibophezela Kwe-Fiji,” uhlelo oluqukethe izimiso ezithuthukisiwe zokuphepha, ezempilo kanye nenhlanzeko emhlabeni wangemva kobhubhane njengoba izwe liphinde livulela abahambi imingcele. Lolu hlelo lwamukelwe yizindawo zokungcebeleka eziqhingini ezingaphezu kuka-200, abavakashi, izindawo zokudlela, izindawo ezihehayo nokunye.
Abangase babe izihambeli e-US bangabhukha ukubhuka ngokushayela (800) 246-3454 noma ukuthumela i-imeyili [i-imeyili ivikelwe], futhi izivakashi ezifika zivela e-Australia zingabhuka ngokushayela (1300) 306-171 noma ngokuthumela i-imeyili [i-imeyili ivikelwe].
Ngeminye imininingwane ngeJean-Michel Cousteau Resort, sicela uvakashele fijiresort.com.
Mayelana noJean-Michel Cousteau Resort
I imiklomelo Indawo kaJean-Michel Cousteau ingenye yezindawo zamaholide ezidume kakhulu eSouth Pacific. Itholakala esiqhingini saseVanua Levu futhi yakhiwe kumahektare omhlaba ayi-17, indawo yokunethezeka ibheka amanzi anokuthula aseSavusavu Bay futhi inikela ngokuphunyuka okukhethekile kwemibhangqwana, imindeni, nabahambi abanokuqonda abafuna uhambo lokuhlangenwe nakho oluhambisana nokunethezeka kwangempela namasiko endawo. IJean-Michel Cousteau Resort inikeza okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka kweholide okususelwa ebuhleni bemvelo balesi siqhingi, ukunakwa okwenziwe ngokwezifiso zakho nemfudumalo yabasebenzi. Indawo yokuphumula ebhekele ezemvelo nezenhlalo inika izivakashi izinto eziningi ezahlukahlukene, kufaka phakathi ama-bures afulelwe ngotshani aklanywe ngokukhethekile, indawo yokudlela esezingeni lomhlaba, uhlelo oluvelele lwezinto zokuzithokozisa, okuhlangenwe nakho kwemvelo okungenakuqhathaniswa, kanye nohlu lwezindlela zokuphefumula ze-Fijian.
Mayelana neCanyon Equity LLC.
The ICanyon Group of Companies, abangabanikazi bendawo yokungcebeleka, enekomkhulu e-Larkspur, eCalifornia, yasungulwa ngoMeyi 2005. I-mantra yayo iwukuthola nokuthuthukisa izindawo zokungcebeleka ezinegama eliwubukhazikhazi ezindaweni ezihlukile ezinezingxenye ezincane zokuhlala okudala umuzwa womphakathi oyingqayizivele kodwa ohambisana kakhulu endaweni ngayinye oya kuyo. . Kusukela yasungulwa ngo-2005 iCanyon idale iphothifoliyo ehlaba umxhwele yezindawo zokungcebeleka, ezindaweni ezisukela emanzini aluhlaza e-Fiji kuya eziqongweni eziphakeme ze-Yellowstone, kuya kumakoloni e-Santa Fe, kanye nase-Canyons eseningizimu ye-Utah.
Iphothifoliyo yeCanyon Group inezakhiwo ezinjenge-Amangiri (Utah), Amangani (Jackson, Wyoming), i-Four Seasons Resort Rancho Encantado (Santa Fe, New Mexico), iJean-Michel Cousteau Resort (iFiji), neDunton Hot Springs, (Dunton , EColorado). Ezinye izinto ezintsha ezimangazayo nazo ziyaqhubeka ezindaweni ezinjengeNhlonhlo iPapagayo, iCosta Rica, neHacienda eneminyaka engu-400 ubudala eMexico, konke kuhloselwe ukwenza izitatimende ezinhle emakethe ye-niche yokuhambela amazwe angaphandle ngokunethezeka njengoba ngamunye kwethulwa .
Funda kabanzi mayelana no Fiji